Washington oo su’aal ka keentay ciidamada Ruushka ee ku sugan Kazakhsta | Entertainment and News Site
Home » News » Washington oo su’aal ka keentay ciidamada Ruushka ee ku sugan Kazakhsta
Washington oo su’aal ka keentay ciidamada Ruushka ee ku sugan Kazakhsta
daajis.com:- Xukuumadda Washington ayaa su’aal ka keentay go’aanka dalka Kazakhstan ee uu taageero militari uga codsaday Ruushka sababo la xiirira dibadbaxyada rabshadaha wata ee dalkaasi ka socda.
Ruushka ayaa sheegay in si ku meel gaar ah uu u joogo Kazakhstan.
Shiinaha ayaa sidoo kale taageero u muujiyay tallaabooyinka lagu soo celinayo xasiloonida Kazakhstan, oo uu ku maal gashaday mashaariic waaweyn.
Ciidamadii ugu horreeyay oo gaaraya 2,500 isla markaana uu Ruushku hoggaaminayo ayaa haatan ku sugan Kazakhstan.
Saraakiisha ku sugan Moscow ayaa sheegay in ciidamada isbahaysiga ah ee ka socda shan dal ka tirsnaan jiray Midowga Soofiyeetka iyo Ruushka ay si kumeel gaar ah u joogaan dalkaas.
wuxuu sheegay in xukuumadda Kazakhystan iyo ciidamadeeda ay awood u leeyihiin inay la tacaalaan dibadbaxayaasha.
Dhanka kale, ciidamada Kazakhstan ayaa haatan gacan bir ah ku qabtay magaalada.
Khamiistii warbahainta dalkaas ayaa baahisya muuqaallo muujinaya ciidamada dowladda oo rasaas ku furaya dibadbaxayaasha.
Wasaaradda arimaha gudaha ayaa sheegtay in 26 dembiilayaal hubeysan iyo 18 ciidamada ammaanka lagu dilay isku dhacyada, iyadoo madaxweyne Tokayev uu qalalaasaha ku eedeeyay waxa uu ugu yeeray aragagixiso shisheeye ah.
Dibadbaxyo ballaaran ayaa axaddi la soo dhaafay ka bilowday Kazakhstan kaddib markii uu cirka isku shareeray qiimaha shidaalka.
Posted by Bulsha Arrimaha Bulshada, Published at 17:54 and have